Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka? [KHATARO kala duwan]
Inicio/Hacking/Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka? [XALAY]
0 697 9 daqiiqo akhri
Ujeeddada laga leeyahay in laga ilaaliyo carruurta inay daawadaan ama soo degsadaan waxyaabo aan habboonayn inta ay internetka ka dhex raadinayaan; waalidiin badan ayaa adeegsada kantaroolka waalidka si loo hubiyo in carruurtoodu u adeegsadaan tiknoolajiyada si masuuliyad leh. Laakiin Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka?Sababtoo ah carruurtu weynaadeen ama qalabku wuxuu u gudbi doonaa gacmo kale, qodobkaan waxaan kuugu sheegi doonaa sida loo baabi'iyo. Ama halkii, sidee u awoodaa hackdhegta xakameynta waalidka.
Ka saar gacanta waalidka mobilka
Android waa nidaamka qalliinka ee adeegsadayaasha ugu badan adduunka, halkaas oo aad ku aasaasmi karto kantaroolka waalidka adoo adeegsanaya aaladda u gaarka ah nidaamka hawlgalka ama soo degsashada barnaamijyada kale. Caadi ahaan, marka laga hadlayo Android, xayiraadaha ayaa lagu dabaqayaa Google Play ama soo degsada barnaamijka uu abuuray Google "Xiriirka Qoyska Google".
Waa muhiim in la ogaado in xakameynta waalidnimo ee aaladahaan loo yaqaan "Xaddidaadaha" kaas oo kaliya xaddidaya qalabka ay ku shaqeynayeen, markaa haddii aad ku dhex adeegsatay Google Play, tani waa habka looga saaro xakameynta waalidka:
Tag Google Play qalabka aad rabto inaad barkinta ka joojiso.
Xagga sare ee shaashadda, dhinaca bidix, riix batoonka Liiska, raacay Qalabaynta ka dibna kontaroolada waalidka.
Waxaad ka heli doontaa badhanka xakameynta waalidka firfircoon, ku dhaji batoonka dami.
Waa inaad gashaa PIN (isla kii aad ku kicin jirtay xayiraadaha), aqbal aqbal.
Haddii aad go'aansatay inaad ku dhaqan geliso xayiraadaha adoo Xiriirka Qoyska GoogleWaa inaad ogaataa in, barnaamijkan, xayiraaduhu ay khuseeyaan aalad kasta oo carruurta yaryar ay marin ugu heli karaan koontadooda google; Intaas waxaa sii dheer, waad u oggolaan kartaa in ka badan hal qof oo qaan-gaar ah oo qaabeyn kara ama ka saari kara kantaroolka waalidka adoo adeegsanaya erey sir ah.
Xaddidaadaha Google Family Link waa la demiyay sidan:
Burcad Google Family Link.
Xulo koontada aad dejineysid.
Xullo Macluumaadka Akoonka, ka dibna dhagsii Jooji kormeerka, raac tilmaamaha shaashadda oo riix in la aqbalo.
Haddii aad rabto inaad ka takhalusto xayiraadaha google play, waxaad u sameysaa sidan:
Waxaad dib ugu laabaneysaa talaabada 2 oo dooro Maamul dejimaha, waad riixaysaa xakamaynta google play.
Xullo waxyaabaha aad rabto inaad uga tagto firfircoon iyo wixii aan ahayn.
Saxaafadda Badbaadi in la dhammeeyo.
Waxaa laga yaabaa inaad daneyneyso: Barnaamijyada xakamaynta waalidka ugu fiican (aaladaha kala duwan)
Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka PS4?
Carruurta da'doodu ka yar tahay 12 sano waa inaysan ciyaarin PlayStation 4, sidaas darteed PS4 wuxuu quseeyaa kontaroolada waalidnimo ee soo socda:
Xaddid saacadaha ciyaarta; waalidka ama madaxa qoyska ayaa xadidi kara xaddiga la xiriira goorta iyo inta uu ilmuhu ciyaari karo.
Xaddid kharashyada bil kasta ee PS4; kharashka billaha ah ee wax ku iibsiga PlayStation Store ee canuggu sameeyo, qaddarka la bixinayo waxaa bixiya maamulka qoyska.
Xaddid isku xirnaanta ama waxyaabaha ay soo saaraan isticmaaleyaasha kale; Xayiraadan waxaad ku xiri kartaa fiidiyowyada, sawirrada iyo qoraallada ay soo diraan isticmaaleyaasha kale, taas oo ka hortageysa xiriirka ka dhexeeya iyaga oo u maraya sheeko.
U deji heerar qiimeynta cayaaraha da'da; Raadi macluumaad ku saabsan kala soocista da'da, markaa waad ogaan doontaa, ka hor intaadan dalban xaddidan, ciyaaraha iyo fiidiyowyada ku habboon ilmahaaga.
Xaddid baaritaanka internetka.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo furo, waxaan u maleyneynaa inaad adigu dhaqaajisay waana aqoontaada inaad ku rakibto waxaad u baahan tahayAbuur koontada Shabakada PlayStation ”, Iyada oo loo marayo koontadan ayaa ah inaad heli karto isticmaaleyaasha PS4 iyo koontooyinka ilmo kasta, mid kasta oo leh xaddidaadda u gaarka ah, guud ahaan waxaa lagu ilaaliyaa lambarka sirta ah.
WAA LAHAYN SIDAN:
Tag shaashadda guriga ee qalabka, ku qor adeegsadaha ugu muhiimsan ee loo yaqaan "Madaxa qoyskaThemacalin", Isla markiiba ka dib, waxaad geli doontaa"Xarunta Dejinta"Oo hubi"Xakamaynta Waalidka”Gali furaha.
Xulo xaddidyada aad rabto inaad deacti ka dhigto iyo kuwa aad rabto inaad kaga tagto firfircoon, ka dib, riix deactivate.
Nota: Hawl-goosadani ma aha mid joogto ah, sidaa darteed, marka qalabka korontada la xiro oo mar kale la xiro, kantaroolka waalidka ayaa la hawlgelin doonaa mar kale. Haddii rabitaankaagu yahay in la joojiyo, hubaal geli xulashada "Soo celi dejimaha konsalka ee caadiga ah"
Sidee loo tirtiraa xakamaynta waalidka ee Samsung Tablet?
Samsung waxaa ka mid ahaa barnaamijka "Kids Mode" ee loogu talagalay taleefannada gacanta iyo Kiniiniyada sanadkii 2015, codsigan ayaa u oggolaanaya kan ugu yar guriga inuu abuuro dabeecad shaqsiyeed sida ay doorbidayaan, marka lagu daro bixinta ciyaaro kala duwan oo loogu talagalay carruurta (qiyaastii 2500), oo la bixiyo oo bilaash ah oo ay ku baran karaan xisaabta, luqadaha iyo kuwa kale.
Kuwani waa tallaabooyinka lagu tirtiraayo qaabka carruurta ee looxa ama Smartphone-ka:
Dib ugu bilow qalabka aalad nabdoon, sida soo socota: dami taleefanka ama kaniiniga, mar kale u daar adigoo riixaya oo haya badhanka awoodda. on off isla mar ahaantaana riix "mugga hoose”, Sidan ayaa dib loogu bilaabay "Habka Nabdoon”Erayadan waa inay ka muuqdaan geeska bidix ee hoose ee shaashadda.
Marka xaalada nabdoon ay bilaabato tag "qaabeynta"Ka dib"codsiyada"Oo tilde"maaree barnaamijyada".
Liiska arjiga, dooro “Qaabka caruurta”, Riix uninstall.
Markay rakibida qalabku dhamaato, waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad riixdo “Dhameeyay"
Ugu dambeyntii dib u bilow kiniinka ama taleefanka si caadi ah.
Sidee looga gudbaa xakameynta waalidka ee Windows 7?
Si aad uga gudubto xakamaynta waalidka ee Windows, waxaad u baahan doontaa inaad haysato erayga sirta ah ee isticmaalaha xaddiday. Hadday sidaas tahay, u gudub xulashada 'Guddi-hawleedka'; halkan waxaad ka beddeli kartaa shakhsi ahaaneed kooxda; ka dib riix qaybta 'xisaabaadka isticmaalaha', ugu dambeyntiina waa inaad doorataa ikhtiyaarka 'U qaabee koontaroolka waalidka ee dhammaan isticmaaleyaasha'.
Ka mid noqoshada qaybtaas waa inaad doorataa adeegsadaha aad rabto inaad wax ka beddesho xakamaynta waalidnimo, laakiin haddii waxa aad rabto ay tahay in laga saaro, waa inaad gujisaa uun meesha (deminta).
Adigoon maamul kaheyn Windows 7.
Haddii aadan haysan erayga sirta ah ee isticmaaleha maamulka, (ama aadan xasuusan) oo aad rabto inaad ka saarto lambarka sirta isticmaalaha gacanta ku haya waalidkiisa, ha ka welwelin, halkan waxaan ku sharaxeynaa waxaad sameyn karto.
Ku bilaw inaad dib u bilawdo kumbuyuutarka waxaadna riixi doontaa F8 fure, si toos ah ayey kuugu muuqan doontaa adiga qaabka aad rabto inaad ku bilowdo Windows, waa inaad doorataa 'Habka Nabdoon'.
Kombuyuutarka wuxuu ku galayaa magaca 'Administrator', waxa ugu fiican ayaa ah inaysan ku weydiin doonin inaad gasho lambar sir ah, toos ugu tag 'Guddiga Xakamaynta'qaybta Xisaabaadka isticmaalaha iyo ilaalinta ilmaha, Markaad ku darto ama ka saarto xisaabaadka isticmaalaha, waxaad dooraneysaa isticmaalaha ugu muhiimsan oo aad ka saareysaa lambarka sirta ah.
Xulashadan waxaad si deggan ugu beddeli kartaa xakamaynta waalidka inta ka hadhay isticmaaleyaasha. Laakiin waa inaad maskaxda ku haysaa in furaha sirta aan dib loo dajin karin.
Sidee looga saaraa kantaroolka waalidka Xbox 360?
Internetka waxaad ka heli doontaa xeelado badan oo lagu joojiyo xakamaynta waalidka Qalab Xbox 360 ah, laakiin, in yar oo runtii shaqeysa, waad layaaban tahay sababta? Fudud, haddii aad ilowdid furaha sirta, Microsoft waxay abuurtaa a furaha guud si aad u dhaqaajiso ka-saarista xayiraadaha iyo lambarka sirta ah ee gaarka ah ee ku xiran lambarka taxanaha ah ee qalabka. In kasta oo ay u muuqato xoogaa adag, runti waa wax aad u fudud, kaliya waa inaad raacdaa talaabooyinkan naafada xakameynta waalidka ee qalabkaaga Xbox360:
Haddii aadan haysan aaladda lagu daray akoonkaaga Microsoft (emailka Hotmail), tag https://account.microsoft.com/devices marka halkaa, daaqad ayaa furi doonta Qalabka ku xiran koontada; Riix badhanka Kudar aaladda, waxaad u baahan doontaa inaad gasho nambarka taxanaha ah ee Console Xbox360 ah.
Horey ayaa loo diiwaan geliyey qalabka, tag xulashada Ficillo badan adiguna aad doorato Koodhka dib u dejinta.
Isla markiiba fure gaar ah ayaa loo soo saaray oo aad ku joojin karto xayiraadaha.
Gali menu-ga qaabeynta qunsulka.
Waxaan galnaa tabta nidaamka oo waxaan ku calaamadeyneynaa liiska xulashada macluumaadka nidaamka
Halkaas waa inaad gashaa lambarka sirta ah ee gaarka ah ee laga sameeyay boggaaga Microsoft (emailka Hotmail). Kadib markaad gasho erayga sirta ah, qunsulku wuxuu dib u bilaabi doonaa dhowr jeer waxaadna u isticmaali kartaa si dabiici ah.
Sidee looga saaraa xakamaynta waalidka WII?
Haddii ay tahay sababta oo ah inaad ilowday furahaaga sirta ah ama aad iibsatay Wii gacan labaad ah oo aad leedahay xakameyn waalidnimo oo horayba loo hawlgeliyey, furitaanka xaddidaadaha si fudud ayaa loo samayn karaa.
In doorashooyinka gasho xakameynta waalidka, waxay ku weydiin doontaa lambarka sirta ah ee aad haysato ilaaway erayga sirta ah, hubi markale inaad haysato ilaaway erayga sirta ah Koodh ayaa la soo saari doonaa oo ay tahay inaad halkan gasho:
http://wii.marcansoft.com/parental.wsgi xaqiiji in taariikhda Wiihiinaga iyo kan bogga lagu muujiyay ay isku mid yihiin (haddii aysan isku mid ahayn, wax ka beddelo, waa inay iswaafajiyaan) galaan "Hel koodhka dib udajinta”Tani waxay kuu soo diri doontaa lambar ay tahay inaad ku qorto kantaroolka waalidka waana intaas.
Sidee loo joojiyaa Netflix?
Netflix waxay caan ku tahay adduunka intiisa badan, tanina waxay ugu wacan tahay tusmada ballaadhan ee ay ka kooban tahay, taas oo aad ka heli karto tiro taxane ah, dokumentiyo iyo filimno ah dhammaan dhadhanka. Netflix (aad u caqli badan) wuxuu leeyahay xakameyn waalidnimo oo aad ku xakameyn karto aragtida waxyaabaha adoo qiimeynaya.
Qufulka qiimeynta da'da
Xirnaanshaha mawduucyada da'da.
Ku xanib taxanaha ama filimada qaarkood.
Kicinta xakamaynta waalidku waa mid aad u aasaasi ah, kaliya waa inaad dejiso biin xadidan oo kasta oo aad rabto inaad dalbato. Laakiin sidee baan uga saaraa kantaroolka waalidka ee Netflix? Hoos ayaan kuugu sharixi doonaa.
Laga soo bilaabo biraawsarkaaga galaan Netflix iyo marin u helaan xisaabta.
Goobaha xulashada kantaroolka waalidka.
Shaashadda geli lambarka sirta ah ee xisaabtaada Netflix.
U beddel heerka xakameynta waalidnimada booska ugu sarreeya, Dadka waaweyn.
Xakamaynta waalidka isla markiiba waa la joojiyay oo waad ku raaxeysan kartaa dhammaan waxyaabaha ku jira Netflix adigoon gelin wax biin ah.
Nota: waxaa suurtagal ah in isbeddelada aysan isla markiiba ka muuqan, markaa waa lagama maarmaan in laga baxo koontada oo mar kale la galo.
Halkan ka daawo: Codsiga xakameynta waalidka ee Android iyo IPhone
Hababka kale ee faa'iidada leh si aad uga boodi karto xakameynta waalidka, adigoon raad ka tagin.
Wakiilka (Kumbiyuutarka Server; waa adeege loo isticmaalo buundo ama dhex dhexaadiyaha oo qanciya codsiyada uu adeegsadehu u adeegsado server kale.Waxay yeelan kartaa shaqooyin kala duwan sida: Shaandhaynta waxyaabaha ku jira ama maaraynta maareynta marin u helkaaga proxies yaqaan waa Hide.me, Nidaamka adeegsiga noocan ah server-ka kombuyuutarka waa mid fudud.
Kaliya waxaad ubaahantahay inaad dhigto URL-ka bogga aad rabto inaad gasho wuxuuna kuu jiheyn doonaa adeege dibadeed taasoo ka dhigeysa inay u muuqato inay tahay degel xalaal ah, sidaa darteed macmiilku wuxuu marin u heli karaa waxyaabaha uu xanibay dhib la'aan. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa jira dhowr Barnaamijyo Maareynta Waalidka oo kala shaandheysa qaar ka mid ah kuwaan Aqoonsiga ah ee aadka loo aqoonsan yahay laakiin wali ma hayaan caymis weyn oo ku saabsan waxa ay tixraacayaan.
Habkani xitaa wuu ka dhib badan yahay xakamaynta marka loo eego Wakiil. Waa wax caadi ah in lala wadaago furaha sirta ah ee Wi-Fi ama waxaa laga yaabaa inuu jiro shabakad furan oo guriga agtiisa ah, tani waxay u oggolaaneysaa cunugga inuu iyaga la xiriiro oo uusan uga tagin raad raadinta xaddidan ee shabakadooda habkan fudud. Xaalad gaar ah, kuwa leh khibrad badan waxay isticmaali karaan barnaamijyo kala duwan oo loo yaqaan "Wax uriya" si loo falanqeeyo loona helo lambarka sirta ah ee Wi-Fi dhow.
VPN waa shabakad gaar loo leeyahay; Tan macnaheedu waxa weeye waxaad ku dhex dabaalan kartaa fidin aamin ah oo ah LAN (shabakad maxalli ah). VPN wuxuu u oggolaanayaa kumbuyuutarka inuu u shaqeeyo sidii soo-qaate iyo ka dhex-dhexaadin leh xogta ku saabsan shabakadaha dadweynaha iyo kuwa la wadaago sida haddii ay tahay shabakad gaar loo leeyahay.
Sida Proxies oo kale waxaa jira noocyo badan oo VPN ah oo la heli karo iyo Kaliya waxay ku saabsan tahay soo dejinta midda ugu amniga badan iyo inay adiga kugu habboon tahayKuwani waa kuwo sii kordhaya oo caqli-gal ah waxayna ku yimaadaan qaabab kala duwan, xitaa sida barnaamijyada sirta ah ee macluumaadka loo diro inta u dhexeysa kombuyuutarka ilmaha iyo router-ka, qaabkan ayaa aaladdu u noqonaysaa mid aan la arki karin Xakamaynta Waalidka iyo weliba tan sidoo kale shabakadda.
Google turjumi; In kasta oo aan horay uga wada hadalnay Wax ku-oolnimada, tan waxaa loo isticmaali karaa mid ahaan si fudud oo fudud. Waxaa laga yaabaa in qaarkeen u arkaan inay tahay turjubaan fudud laakiin waxay ku leedahay xulashooyin badan, sida marka aad dhigto URL waxay tarjumi kartaa bog dhan sidaasna macluumaadka la turjumay lama oga oo waxay u egtahay raadinta Google lafteeda inay tahay macluumaad xaddidan ka socota Xakamaynta Waalidka.
Navigators-ka La qaadan karo
Daalacashada la qaadan karo waa hab fudud, waxaa jira daalacashadayaal la qaadan karo oo kala duwan oo laga heli karo shabakada sida Tor Browser, kuwani waxaa lagu qaadi karaa USB-ga oo qasab maahan in lagu rakibo qalabka. Browsers sida Tor waxay u wareejinayaan taraafikada meelo kala duwan oo adduunka ah si ay u qariyaan aqoonsiga isticmaalaha. Tor hadda waa adeeg khilaaf weyn ka dhex jiro internetka, waana in isticmaaleyaal badani u isticmaali karaan barmaamijkan kaliya in laga gudbo kantaroolka waalidka, laakiin sidoo kale ujeeddooyin dambiyeed.
sida looga boodo xakameynta waalidka xakameynta waalidka xakamaynta waalidka gacanta waalidka guurguura gacanta waalidka daalacashada la qaadi karo wakiilka xakameynta waalidka xakameynta waalidka ps4 kiniinka gacanta waalidka samsung turjubaanka xakameynta waalidka xakamaynta waalidka vpns wifi xakameynta waalidka xakamaynta waalidka daaqadaha xakamaynta waalidka 7 xakameynta waalidka xbox 360 gab xakameynta waalidka netflix gab xakameynta waalidka ka saar xakameynta waalidka isku xirka qoyska google hab kids ka saar xakameynta waalidka ka saar xakameynta waalidka ps4 ka saar samsung kaniiniga xakameynta waalidnimada ka saar xakameynta waalidka wiilasha ka saar daaqada xakamaynta waalidka 7 ka saar xbox xakameynta waalidka 360 ka bood xakameynta waalidka raad la'aan